Shiinaha Hose Hobbles Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Linhui Hardware
Alaabta Badbaadada Tuubbada Supply sida sharabaadada jeedal, jeedalka joogsiga, Cable Chokers, Nylon chokers iyo Hose Hobbles sidoo kale waxay u yaqaanaan tuubada Clamps.
Heerarka API waxay u baahan yihiin ugu yaraan xoogga jabinta 16,000 rodol ee xirmooyinka badbaadada tuubada wareega.
Tijaabooyin ballaadhan oo ku saabsan Badbaadadayada - nidaamyada hobble si loo hubiyo inay buuxiyeen heerarka adag ee API.
BANDHIGGA BANDHIGGA TUBOOYINKA
Tuubooyinka tuubooyinka waxaa lagu bixiyaa labadaba hal iyo laba laab labadaba cadaadiska sare iyo codsiyada cadaadiska hooseeya. Waxay ku daboolan yihiin oo dahaarsan yihiin cimri dheer waxaana loo sameeyay cabbir kasta si ay ugu habboonaato inta badan dhammaan tuubooyinka suuqa. Waxaan siinaa xirmooyin inta badan soo saarista tuubooyinka waaweyn si aan u fahamno cabbirka OD ee inta badan tuubooyinka wax soo saarka sida Gates, NRP Jones, Goodyear, iyo noocyada kale ee tuubooyinka iyo sidoo kale xirmooyinka tuubooyinka biyaha ee yar yar iyo tuubada warshadaha cadaadiska hooseeya ee noocyo badan sida Alga Gomma, Texcel Rubber iyo kuwo kale oo badan.
Tuubbada rotary-ga ee cadaadiska sare leh ayaa dillaacay iyadoo cadaadiskeedu yahay 3000 psi. Tuubbadu waxay ku dhacday sagxaddii riigagga waxayna ku dhacday qoor qallafsan. Isagu si xun uma dhaawacmin, in kasta oo dhacdadu ay noqon karto mid halis ah.
Maxaa sababay:Tuubada waxaa lagu qiimeeyay 5000 psi cadaadis shaqo. Baadhitaan la sameeyay dhacdadan daba socotay ayaa daaha ka qaaday in xakamaynta xakamaynta aan si sax ah loo dhigin hareeraha xargaha calaamadaynta jaalaha ah ee lagu calaamadiyay "Xajinta Nabdoonaanta Halkan". Taa baddalkeeda, xirmooyinka waxaa la dhigay meel u dhow midowga curyaanka ah halkaasoo dhexroorka tuubada ay ka weyn tahay.
Xaaladdan oo kale tuubada ayaa dillaacday markii ay ka soo baxday ferule dhammaadka. Maaddaama xajinta nabdoonaanta ay ku jirtay meel khaldan, si sax ah uma xajin tuubada, taas oo si buuxda u dhex martay. Intaa waxaa dheer, waxaa la ogaaday in xirmooyinka nabdoonaanta ay aad u weyn yihiin si ay u qabtaan dhexroorka yar ee tuubada ka hooseeya feerka.
Waa mas'uuliyadda kaliya ee isticmaala dhamaadka si uu u hubiyo cabbirka saxda ah & meelaynta nidaamyada hobble.
Tallaabada 1-Cabir dhexroorka tuubada.
Talaabada 2- Hubi in Hoobble Clamp uu yahay cabbirka saxda ah.
Tallaabada 3-Raadi meel ku habboon tuubada si aad ugu rakibto Hobble Clamp. Tuubbada waa in lagu calaamadeeyaa qiyaastii 12" marka loo eego qalabka qallafsan.
Talaabada 4-Rakib Xidhiidhka Hobble, ku rux boolalka ilaa 60 rodol ilaa inta xajintu si adag ugu dheggan tahay tuubada.
Tallaabada 5-Ku dheji fiilada ama silsiladda Xargaha Hobble, ka dibna ku dheji dhammaadka kale ee fiilada ama silsiladda bar ku habboon.
Hore: Lanyard dib loo celin karo Baby Anti Lost Wristbands
Xiga: Xargaha Xargaha Xargaha ee Afar-Isha ee Xargaha Xargaha
Chokers Iron Cas
Dharbaaxada Birta Cas